Kutheni abathengisi befuna i-CMS kwizixhobo zabo kulo nyaka | Martech Zone
Abathengisi abaninzi kwilizwe liphela bajongelwa phantsi isibonelelo sokwenene a Inkqubo yokuThengisa umxholo (CMS) unokubabonelela. La maqonga amangalisayo abonelela ngobutyebi bexabiso elingafunyanwanga elingaphaya kokuvumela nje ukuba benze, basasaze kwaye babeke esweni umxholo kuwo wonke amashishini.
A Inkqubo yolawulo lomxholo (CMSliqonga lesoftware elixhasa ukwenziwa kunye nokulungiswa komxholo wedijithali. Iinkqubo zolawulo lokuqukethwe zixhasa ukwahlulwa komxholo kunye nentetho. Iimpawu ziyahluka ngokubanzi kodwa uninzi lubandakanya ukushicilelwa okusekwe kwiwebhu, intsebenziswano, ulawulo lwefomathi, ukuhlelwa kwembali kunye nolawulo lwenguqulo, isalathiso, ukukhangela kunye nokubuyisa. Wikipedia
Kwi-2016 yethu Ingxelo yeMeko yeTekhnoloji yeNtengiso Sifumanise ukuba iipesenti ezingama-83 zamashishini ngoku zisebenzisa i-CMS, ziyibeka njengeyona ndawo iqhelekileyo yesoftware yentengiso. Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi baphoswa lixabiso eliyinyani elinokubonelelwa zezi ziqonga kwizicwangciso zabo zokuthengisa ngokubanzi kunye ne-ROI.
Uphando lwethu lukwabonakalise ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sabathengisi bayasokola ukusebenzisa ngokuzithemba iitekhnoloji zorhwebo ngaphaya kotyalo mali lokuqala (53%). Ngokukodwa nge-CMS, kuninzi kakhulu eqongeni kunokuba abathengisi bayiqonda, ke kubalulekile ukuba ezi zixhobo zisetyenziselwe ukuxhasa ubuchule kunye nokukhuthaza abathengisi ukuba bacinge ngaphandle kwebhokisi.
I-CMS ifuna ukuba abathengisi babonelele ngomxholo owenzelwe wena obandakanya abaphulaphuli kunye nabathengi abanokubakho, ngelixa bephendula kwiimfuno zabasebenzisi kunye neemfuno zabo. Njengabathengi ngoku banxibelelana neempawu kuluhlu lwezixhobo ezahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo, isixhobo esinqamlezileyo kunye nokudityaniswa kwesitayile kubalulekile kodwa kunokuba yinto enzima. Ingxelo yethu ye-2016 ifumanise ukuba ngaphezulu Isiqingatha sabathengisi (51%) kubenzima ukusabela kwiitshaneli ezintsha okanye kwizixhobo, ukuqaqambisa ukuba akusoloko kulula ukuzibandakanya kwisicwangciso seCMS.
Ukufezekisa uhambo olungenamthungo lwabathengi olwenza ukuba uphawu luhambise nantoni na efunwa ngumthengi, nangaliphi na ixesha abayifunayo, abathengisi kufuneka babeke phambili iqhinga lezixhobo ezininzi. Oku kufuna inqanaba lokuphuculwa kokuqonda, okuthetha ukuba abathengisi kufuneka baqale ukuzisebenzisa kwaye basebenzise izakhono abazifunayo ukuze bakwazi ukuxhaphaza ngokuzithemba esi sixhobo ngezizathu ezifanelekileyo. Oku kuyakuvumela iimveliso ukuba zikubone ukubaluleka kwe-CMS ekuqiniseni izicwangciso kunye neenjongo.
Ukufaka uLogic kwi-CMS
Ukuba iwebhusayithi yohlobo lwentengiso ayiboneleli ngeli thuba, amava adityanisiweyo adityanisiweyo kwindalo, ithuba lizibonisa ukuba umthengi ajonge kwenye indawo ukuba akanelisekanga yinkonzo. Uphando olwenziwe ngu I-Verint kunye ne-IDC ifumanise ukuba iminyaka yedijithali yenze ukuba kube nzima ngakumbi ukuba iimveliso zibambelele kubathengi njengoko izinto ezintsha zetekhnoloji zenza ukhetho kunye namathuba ngakumbi kubathengi.
Ukuqinisekisa uhambo olungenamthungo lwabathengi, kubalulekile ukuba i-CMS iqhubeke kakuhle xa isetyenziswa ngokudibeneyo namanye amaqonga, anje ngeeNkqubo zoLawulo lwaBathengi (CRM). Umthengi kufuneka abe kwiziko laso nasiphi na isigqibo sentengiso kwaye oku kwahlukile xa ucinga ngesicwangciso seCMS. Izixhobo kufuneka zidityaniswe kumbutho wonke ukuzibandakanya nabathengi ngexesha langempela, ukuguqula iindwendwe zibe ngabathengi ababuyayo kunye nokuvumela iqela lokuthengisa ukuba liphucule kwaye lihlalutye iimpawu zabathengi. Oku kuqonda kunye nobuchule bunokusetyenziselwa lonke ishishini, ukubeka iqela lokuthengisa njengeziko eliqwalaselwe kakhulu lolwazi kuyo yonke inkampani.
UmThengi kweli Ziko
Ukukwazi ukuhambisa umxholo ofanelekileyo, ukubandakanya kunokwenzeka kuphela ukuba umthengi usembindini wesicwangciso seCMS. Ngokubeka umthengi ngaphambili, abathengisi kufuneka baqonde ngokuthe ngqo ukuba loluphi uhlobo lomxholo abawufunayo. Eli nqanaba lomntu linokufezekiswa ngokulula kuhlalutyo lwemveliso okanye ukudityaniswa. Iya kutyhoboza ukuqonda kulo lonke ishishini, ivumele amaqela ahlukeneyo kunye namacandelo ukuba akhe umxholo ohambelana kakhulu nabathengi kunye nabachaphazelekayo.
Ngokuthatha le ndlela ngesicwangciso-qhinga se-CMS, iyakuvumela ixesha elide lomxholo, ngokumisela into enomdla kwikamva elibonakalayo, kunye nangoku. Umxholo wobuqu unokwabiwa kulo lonke ishishini kunye nangaphandle kwithemba kunye nabathengi, kuluhlu lweqonga lobuchwephesha. Oku kuyakuvumela amashishini ukuba asebenzise onke amajelo abeke imali kuwo xa benxibelelana nabasebenzisi kuwo onke amanqanaba ohambo lokuthatha izigqibo.
­­­­­­­­­­­Kubaluleke ngoku kunanini na ngaphambili ukuba abathengisi baqiniseke ukuba bahlala besabela kutshintsho kumzi mveliso wedijithali. Kuya kufuneka babe nokuqonda okupheleleyo xa besebenzisa izixhobo zangoku kunye nezintsha kunye namaqonga. Ukuziphatha kwabaThengi kuhlala kuhlala kuhlobo lotshintsho kwaye ngokusebenzisa izixhobo ezijikeleze oko, abathengisi banokuhlala amanyathelo amabini ngaphambili ngalo lonke ixesha.
tags: CMScms ukudityaniswaulawulo lokuqukethweInkqubo yolawulo lomxholoCRMUmdibaniso wejelo lomnqamlezoulawulo oludibene nabathengidefinitionhambasquizingqungquthelaYintoni iyintoni i-cms
Umququzeleli weshishini lotshintsho lwedijithali, Squiz. I-squiz ngomnye wabanikezeli besisombululo esisekwe kwiwebhu. Ibonisana, yakha kwaye ilawule iwebhusayithi ebandakanyekayo kunye nokusetyenziswa kwe-Intanethi kusetyenziswa imveliso yethu evulekileyo yoLawulo lwamava eWebhu, iSquiz Suite.
Ungasisebenzisa njani iSiqendu soLwazi-seSiseko